Ndenye Blog: Lendo.org | Martech Zone
Daalụ André maka arịrịọ mbụ m nyere m na asụsụ ọzọ! Lendo.org (atụgharịrị: Ọgụgụ) bụ blọọgụ sitere na Brazil gbasara nyocha akwụkwọ, nyocha akwụkwọ, echiche agụmakwụkwọ nke akwụkwọ, asụsụ, ọrụ, abụ na ndị ọzọ!
ekele ntụgharị google, M nwere ike n'ezie na-agụ posts ma na-a lee anya na saịtị. André bụ onye na-ede blọgụ mara mma, ị nwere ike ịkọ na ederede ya, ọ na-eme ya iji kọọrọ ndị na-ege ya ntị agụụ ya.
Chọta ohere iji melite Lendo.org bụ mgba, ọ rụgoro ọrụ dị ịtụnanya n'ịkwalite blọgụ ya - o doro anya na ọ na-akwụ ụgwọ! Ihe odide André dị oke egwu (enwere m ike ịhụ nke a ọbụlagodi na ntụgharị) yana onyonyo gbasasịrị n'ọtụtụ posts - na-enye ọmarịcha ihu maka ọdịnaya ahụ.
Ihe akara RSS bu uwa nile maka ịpị na ịdenye aha na ndepụta. Na peeji nke obibi gị, akara a nwere njikọ nke edemede na “Gịnị bụ RSS?” mana njikọ ịgbakwunye ndepụta anaghị arụ ọrụ n'ezie (opekata mpe na Firefox na Mac). Ekwenyere m na ị nwere ike gbanwee div ahụ ka ị nwee ike ịhapụ… ọ bụrụ na mmadụ pịa akara RSS, a ga-ewetara ha na adreesị ndepụta gị. Ọ bụrụ na ha pịa njikọ dị na isiokwu ahụ, ha ka nwere ike ịgụ isiokwu ahụ:
You nwere ike itinye “cursor: pointer” na faịlụ CSS gị karịa nkwupụta div.
M ga-gbanwee gị Description div (
) gaa n'ụdị isi h2. Nke a ga - enwe mmetuta karia ime ka edeputara okwu ndi ahu na igwe ihe ichoro.
Ihe mbụ m chọpụtara mgbe m rutere saịtị ahụ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị ọdịnaya 'n'elu ogige atụrụ'. Nke ahụ bụ, Achọrọ m ịpịgharịa iji nweta ihe ọ bụla m na-achọ. Na ọdịbendị, ejighi m n'aka ma ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị nabatara nke a mana ọ na-echekarị ndị dị ka m. Might nwere ike ịnwale ijikọ aha blog gị, nkọwa ya, na ibe ọ bụla n'ime otu mkparịta ụka na-ewepu ọtụtụ peeji dị elu nke furu efu ugbu a na ihe ndị ahụ. Nke ahụ ga-akụtu ntakịrị nke ịdị elu nke a na-eji ugbu a maka ihe ole na ole dị n'ebe ahụ.
Enwere m mmasị na nhazi ahụ na ngalaba ihe ọmụma dị na ala nke ibe ahụ, mana m juru m anya na ọ dị! Ọ bụrụ na enwere ụzọ ị ga-esi jiri isi nke blọọgụ gị dịka ụkwụ nke ibe ahụ, nke ahụ ga-adị mma. I nwedịrị ike ịchọrọ ịkpọtụrụ ụkwụ nke ibe ahụ site na itinye akara akara More (mais?) Yana bọtịnụ ibe gị ndị ọzọ na-awụda onye na-agụ ya na ngalaba ahụ.
Edere ederede nke onwe na nke mmadu, ma ejighi m n’aka ma o dikwa ya. Ọbụna na ntụgharị asụsụ, enwere m ike ịchọpụta agụụ ị nwere maka Ọgụgụ. Foto ahụ (nke gị?) Ọgụgụ dị egwu. Ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ ụdị foto elu nke ibe ahụ. Ikekwe foto ọzọ gị ma ọ bụ ihe osise nke akwụkwọ a gbanyeere na mbido.
Peeji Banyere (sobre?) Ga-aba uru. Onye ka ị bụ? Gịnị mere i ji nwee mmasị n'ịgụ ihe? Kedu ihe mere ịmalitere blog a?
Ọbụna na Google Translate, abịara m nwee ike ịhụ na ike ide ihe nke André karịrị nke m. M mere gafee akwa post na iche nke ide ihe na komputa ma obu edeputa ya.
Ọrụ dị egwu, André! Daalụ nke ukwuu maka ịrịọ ego a!
Tags: nkọwadivn'ogige atụrụgoogle translateọmụmagbasaaakara ngosi rssRSS akaraurchintracker
Jul 8, 2007 na 11: 49 AM
Atụmatụ ebube Douglas!
Anọ m na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide iji melite blog ma enwere m obi ụtọ na ịmara na ọdịnaya ahụ masịrị gị, ọbụlagodi na ntụgharị.
Daalụ nke ukwuu maka ndụmọdụ na otito!
Aga m eme mgbanwe ndị a n'oge na-adịghị anya wee laghachi ebe a iji gwa nsonaazụ ya.
Jul 8, 2007 na 12:44 PM
Biko mee, André! Ọ ga-amasị m ịnụ azụ.
Jul 8, 2007 na 12:08 PM
Ekele diri enyi m! Abụ m ezigbo enyi Andre na abụ m onye edemede!
Jul 10, 2007 na 11: 49 AM
Ndewo ọzọ Douglas!
Emeela ya 🙂
- Njikọ RSS
- The mkpado nkọwa (ugbu a, m nwere a beautifull h2 :))
- Mgbanwe dị n'elu, iji kụtuo nnukwu ịdị elu yana "mee ka ọ maa mma" ma metụta ya na ukwu
- Dere ihe “banyere” peeji nke 😉
- Tinye njikọ “ọzọ” dị ka arịlịka ka n'okpuru
- Mee ka ngụkọta ya na mkpebi 1024 × 768
- Dịkwuo akara-elu, iji ka mma ọdịnaya nke okwu ihu ọha
Ihe ọ rụpụtara na-amasị m nke ukwuu! M ka nwere ụfọdụ nkọwa idozi, ma m na-eche na m blog bụ nnọọ mma ugbu a!
Jul 10, 2007 na 2:11 PM
Chaị! André saịtị ahụ dị ezigbo mma! Mgbe izu ole na ole gasịrị, biko hapụ m mmetụta nke mgbanwe ndị a. Kwesịrị ịmalite ịmalite iji nwayọọ nwayọọ bulie oge.
Jul 17, 2007 na 1:15 PM
Ụchụ gbakwa! Enwere m nnukwu nsogbu na google na mgbanwe URL ahụ = (
Ọtụtụ peeji zoro na nsonaazụ, yana okporo ụzọ m dị oke njọ = (
Nsonaazụ sitere na mgbanwe nhazi ga-ewe ọnwa ole na ole. Ọ bụ olulu ..
Jul 17, 2007 na 2:40 PM
Gini gbanwere na URls, André? Ikekwe ị nwere ike ịdepụta redirect ma ọ bụrụ na URI nke posts agbanweela. Mee ka m mara ma m ga - enyere gị aka n’ụzọ ọ bụla.
Jul 17, 2007 na 2:48 PM
Daalụ site na enyemaka Doug! Mana m gbanwere usoro ahụ site na ndabere% ụbọchị% /% postname% ka naanị% postname% wee jiri Dean's permalink migration ngwa mgbakwunye iji mee 301 redirection. Agbanyeghị, agbajiri ọkwa m na injin ọchụchọ.
Echere m na enweghi ụzọ idozi nke a. Naanị chere ọkwa ọhụrụ = (
Mgbe ọtụtụ oge gasịrị, edepụtara m peeji m ọzọ, maka ihe ijuanya m, nleta ahụ mụbara banyere 400%! Chaị!
Nsonaazụ nke mbọ SEO m na itinye n'ọrụ ndụmọdụ gị dị ebube!